नगरमा फगिङ्ग स्प्रेलाई चुनौती दिदै डेङ्गु, पथरीमा थप डेङ्गु संक्रमित फेला - Radio Simrik || 96.5 Mhz
नगरमा फगिङ्ग स्प्रेलाई चुनौती दिदै डेङ्गु, पथरीमा थप डेङ्गु संक्रमित फेला
प्रकाशित मिति: बिहिबार, आषाढ १९, २०७६ समय: २१:३९:३५
सुनसरीको धरानमा महामारीको रुप लिएको डेङ्गु क्रमश मोरङ्ग, झापा लगायतका जिल्लामा समेत देखा पर्यो। यसले महामारीको रुप नलियोस भन्ने उदेश्य सहित डेङ्गु विरुद्ध विषादी छर्कने अभियान संचालन भयो। तर डेङ्गुका संक्रमित भेटिने क्रम रोकिएको छैन। मोरङ्गको पथरी शनिश्चरेमा फेरि १ डेङ्गु संक्रमित फेला परेका छन। बेलबारी स्थायी घर भई मोरङ्गको पथरी शनिश्चरे १ मा होटल संचालन गर्दै आएका पुर्ण बहादुर तामाङ्गमा डेङ्गुको संक्रमण देखिएको हो। स्वास्थ्यमा समस्या देखा परेपछी परिक्षणका लागि मोरङ्ग हस्पिटल पथरी पुगेका तामाङ्गमा डेङ्गुको संक्रमण देखिएको अस्पतालले पुष्टि गरेको छ। अस्पतालले संक्रमित तामाङ्गलाई थप उपचारको लागि धरान स्थित विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रेफर गरेको छ।
नगरका प्रायः सम्पुर्ण वार्डहरुमा डेङ्गु विरुद्दको विषादी छर्की सकिएको अवस्थामा कसरी डेङ्गुको संक्रमण देखा पर्यो त? प्रश्नको उत्तरमा पथरी शनिश्चरेका स्वास्थ्य संयोजक मुरारी आचार्य भन्छन- ” विषादी छर्कदैमा पुर्ण निर्मुल नै हुन नसक्ला, तर न्यूनीकरण पक्कै भएको छ”। त्यसैगरी आज फेला परेको संक्रमित पथरीबाटै संक्रमित भएको हो या आयातित हो विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान पश्चात् भन्न सकिने आचार्यको दावी छ। आयातीत संक्रमण हो कि भन्ने जिज्ञासामा पिडित तामाङ्गले आफू नगर बाहिर कहिँ नगएको र नगरमै संक्रमित भएको दावी गर्छन।
राष्ट्रले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा व्यापक लगानी गरि समयानुकूल विभिन्न कार्यक्रम गरिरहदा समेत विभिन्न रोगका संक्रमणले निरंतरता पाइरहदा कतै ती लगानी बालुवामा पानी त भैरहेको छैन? भन्ने प्रश्न जनतामा छाउन थालेको छ। त्यसैले समयानुकूल कार्यक्रमहरुमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरुलाई समेत प्राथमिकता दिएको खण्डमा स्वास्थ्य क्षेत्रका हरेक लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुने थियो कि ?